ကတော့ကိုကလစ်နှိပ်ပါရန် GoDaddy ပိုင့်ရန်ကဘယ်လို - အဆိုပါနေ့၏ကတော့
ယခုတွင်သင်သည်ပိုင့်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်အကြောင်း GoDaddy သုံးလွယ်ကူသောခြေလှမ်းအတွက်ကတော့နှိပ်ပါ.
သငျသညျဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခင်မှာသင်ပြီးသားကို set up ရဲ့သေချာသင့်ရဲ့ဒိုမိန်းရဲ့အမြစ်စေပါလိမ့်မယ်.
အဲဒီနောကျသငျသညျကိုသှားဖို့ရှိသည် လှမ်း 1: သင်ပြုသောအမှုကြသောအခါ၎င်းတို့၏က်ဘ်ဆိုက်ထဲမှာသီဆိုက CNAME စံချိန်ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါတယ်သင်သည်သင်၏ဒိုမိန်းရဲ့ DNS setting များကိုကောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်.
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. WWW အတူ CNAME ကရရှိနိုင်မယ့်သေချာပါစေ, သငျသညျ clickfunnel ရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်မှ redirected ခံရဖို့ပစ်မှတ်တည်းဖြတ်ကြဘူးတခါ.
သင်ပြုသောနေကြသည်ပြီးနောက်ကိုသွား လှမ်း 2: အဆိုပါရှေ့ဆက် setting တွင်ချ scrolling ကရှေ့ဆက်အုပ်ချုပ်မှုကို add, https ကိုရွေးချယ်ခြင်း://, သင့်ရဲ့ဒိုမိန်းဝင်ရောက်, "အမြဲတမ်း" နှင့် "ရှေ့ကိုသာ" တွင်ကတက် setting.
တစ်ချိန်ကကိုအပ်ဒိတ်လုပ် and save.
ယခုငါတို့သွားပါ အဆိုပါ 3rd နှင့်နောက်ဆုံးခြေလှမ်း: နှင့်သင်၏ဒိုမိန်းဖြည့်စွက် Clickfunnels.
ဒါဟာသင်က "ကိုအသုံးပြုရန်လက်ရှိဒိုမိန်း" option ကို click နှိပ်ပြီးဖွင့်ပြုပါရန်ရှိသည်အားလုံးကတည်းကအလွယ်ကူဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, input ကိုသင့်ရဲ့ဒိုမိန်း, က "ပြီးပြီခြေလှမ်း" option ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, တစ်ဦးကတော့နှင့်သင်၏ဒိုမိန်းပေါင်းသင်းနှင့်သင့် SSL ကိုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြ.
အောက်မှာ Filed: Clickfunnels အတူ Tagged: pint godaddy to click funnels